Tababarihii Soo Saaray Kabtanka Ajax Ee Matthijs de Ligt Oo Hal Koox Oo Premier League Ah Kula Taliyay In Ay Si Deg Deg Ah Ula Wareegto De Ligt. - Gool24.Net
Kabtanka kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt ayaa xagaagan noqday xidiga loogu doonista badan yahay kooxaha Waa wayn ee Yurub.
Laakiin tababarihii soo saaray De Ligt oo hadda ah tababaraha kooxda Bayer Leverkusen ee Peter Bosz ayaa De Ligt kula taliyay kooxda ay tahay in uu ku biiro.
Peter Bosz oo hore u soo ahaa macalinka kooxda Ajax isla markaana door ku lahaa barbaarintii 19 sano jirka reer Holland ee De Ligt ayaa sidoo kale hal koox oo Premier League ah ugu baaqay in ay si deg deg ah ula saxiixato xidigan.
Kooxaha Barcelona, Real Madrid, PSG, Man United, Man City iyo Liverpool ayaa dhamaantood lala xidhiidhinayaa saxiixa Matthijs de Ligt.
Laakiin tababare Peter Bosz ayaa kooxda Man City ugu baaqay in ay si deg deg ah ugu dhaqaaqaan saxiixa De Ligt si uu badal ugu noqdo Vincent Kompany oo kooxda ka baxaya.
Ugu horayn Peter Bosz oo ka hadlaya De Ligt iyo waxa uu fiicnaan lahaa ayaa yidhi: “Caadiyan waxaan sheegi lahaa in wiil 19 sano jir ah kaas oo soo qaatay laba sanadood oo xirfada kubbada cagta ah in ay u iman doonto oo uu laba sanadood oo khibrad dheeraad ah uu ku qaato Ajax”.
” Marka la joogo Eredivisie (horyaalka Holland), Champions league, waxaan filayaa in Matthijs uu cadeeyay in uu sharci khaas ah yahay ee in uu haddaba talaabadaas diyaar u yahay. Laakiin maxay tahay talaabada ugu fiicani?” ayuu Bosz hadalkiisa sii raaciyay.
Laakiin Peter Bosz oo talo cad siinaya Man City iyo De Ligt ayaa yidhi: “Waxaan indhahayga ku arkaa meesha kooxda aad ka ciyari karto. Haddii aan anigu joogi lahaa Manchester City, si deg deg ayaan isaga u heli lahaa”.
“Vincent Kompany wuu baxayaa, anigu ma filayo in Nicolas Otamendi uu in ku filan u fiican yahay. Waxa uu aad ugu haboonaan karaa Laporte. Isagu (Laporte) waxa uu si xataa ka sii fiican ula ciyaari karaa Matthijs oo isaga ku xiga, taas waan ku qanacsanahay” ayuu Peter Bosz sharaxaadiisa sii raaciyay.
Dhinaca kale Peter Bosz ayaa De Ligt u sheegay sababta ayna Barcelona ugu sahlanaan doonin haddii uu ku biiro wuxuuna yidhi: “Sidoo kale waxaan meel kasta ka maqlay Barcelona, laakiin halkaas waxaa waajib kugu ah in aad la tacaasho Gerard Pique”.
Dabaal degii koobka Holland ee De Ligt
“Taasi waxay la micno tahay, haddii uu xaqiiqdii Samuel Umtiti baxo, in ay waajib ku noqonayso in uu ka ciyaaro difaaca dhexe oo bidix ah, taas oo aan dhibaato ku noqonayn, sababtoo ah, waxaan filayaa in Matthijs uu si sahlan uga ciyaari karo bidix iyo midig ee ka difaac dhexe ahaan” ayuu Peter Bosz hadalkiisa ku soo xidhay.
Hadalka Peter Bosz ayaa dhiiro galin siin kara Pep Guardiola oo markii horeba dagaal ugu jiray in uu kooxaha waa wayn kula tartamo saxiixa De Ligt.